विराटनगरमा सटर फो, डे, र मोबाइल पसलमा चो, री – Dainik Sangalo
विराटनगरमा सटर फो, डे, र मोबाइल पसलमा चो, री
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक ०७, २०७८ समय: ११:४८:३३
विराटनगर महानगरपालिकामा २४ घण्टाभित्र दुई मोबाइल पसलमा चो, री भएको छ । विराटनगर–९ स्थित हिमालयन रोडमा रहेको मोबाइल पसलमा चो, री भएको २४ घण्टा नबित्दै अर्को मोबाइल पसलमा चो, री भएको हो ।
गए राति विराटनगर–७ शनिमन्दिर चोकअगाडिको कोमल मोबाइल ट्रेडसमा चो, री भएको प्रहरीले जनाएको छ । उक्त मोबाइल पसलबाट ५० भन्दा बढी सेट मोबाइल चो, री भएको सञ्चालक राजकुमार राईले बताए । शनिबार पसल बन्द गरेर घर गएका उनले आइतबार बिहान एक्कासि मोबाइल पसल चोरी भयो भनेर खबर पाएका थिए ।
सञ्चालक राईले अनुसार पसलमा राखिएको साढे ८ हजार रुपैयाँ चो, रे, ले लगेको बताए । मोबाइल पसलसँगै नजिक रहेको किराना पसल चो, री गरेपछि कोमल मोबाइल ट्रेडसमा रहेको मोबाइलहरू चो, री गरेको देखिएको छ । शिवु सरकारले सञ्चालन गरेको किराना पसलदेखि १५ हजार रुपैयाँ र अन्य किरानाका सामानहरू पनि चो, री भएको बताइएको छ ।
यसअघि पनि विराटनगर–९ हिमालय रोडस्थित सनराइज इन्टरप्राइजेज नामक एक मोबाईल पसलमा चो, री भएको थियो । सटरको ताला फुटाएर शुक्रबार राति पसलमा चोरी भएको प्रहरीले जनाएको छ । पसलबाट झण्डै १ लाखभन्दा बढी मूल्यका डेढ दर्जन बढी स्मार्टफोनहरू चो, री भएका थियो । ग्राहकले बनाउन दिएका मोबाइलहरू पनि गायब रहेको पसलका सञ्चालक मधु राईले बताएका छन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले आइतबार (आज) प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिँदै छन् । नेकपा एमाले विभाजनको दोस्रो दिन गत भदौ १० गते प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले शुक्रबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
अब, आइतबार दिउँसो साढे १२ बजे बस्ने संसद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीको सो प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । छलफलपछि आजै मत विभाजन पनि हुनेछ ।
मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि शुक्रबार नवौँ तथा हिउँदे अधिवेशनको तेस्रो बैठक थियो । सो बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव टेबल गरेका थिए ।
भदौ ९ मा एमाले विभाजित भएको भोलिपल्ट गठित सरकारले दल विभाजनको ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर संवैधानिक प्रावधानको आफू अनुकूल ब्याख्या गर्दै सरकारले आफ्नो आयु लम्ब्याउने प्रयास गरिरहेको थियो ।
असोज २४ गतेको बैठकपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले असोज २५ गतेका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर प्रदेशसभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले २४ गते साँझ नै सूचना जारी गर्दै संसद् बैठक कात्तिक ५ गते शुक्रबारका लागि बैठक तय गरिएको सूचना निकालेका थिए ।
Last Updated on: October 24th, 2021 at 11:48 am
२.	यी युवक रातभरी ३२ किमि हिँडेर पहिलो दिन अफिस पुगेः मालिकले भावुक हुँदै उपहारमा दिए नयाँ कार
४.	झुपडी भित्र औसधि खाने पैसा नभएर आमा म र्दै छिन् ,१७ वर्षकि छोरी आमा बचाइदिउ भन्दै भक्कानिन्छिन् (भिडियो हेर्नुस्)
५.	दुबइमाअलपत्र पार्ने,मेनपावर पुग्दा एजेन्टसँग चर्काचर्की, ढोका थुनेर लुकिन् एजेन्ट(भिडियो हेर्नुहोस्)
६.	गुठिज्यूलादेखि नेपालगञ्ज जाँदै गरेको बस सडकदेखि २०० मिटर तल खस्यो,३२ वर्षीय बस चालक र नवीनको मृत्यु्
७.	नेपालमा आयोजनामा ​​खटिएका चिनियाँ कामदारको स्थानीय नेपालीसँग झx’डxप
८.	आजको राशिफल : वि.सं.२०७८ साल मंसिर १५ गते । बुधबार । ईश्वी सन् २०२१ डिसेम्बर ०१ तारिख
९.	गीतबाट राम्रो कमाइ नभएपछि कालिमाटिमा तरकाली व्यपबार सुरु गरे चर्चित गायम सत्यराज आचर्यले